खोलाको किनारमा ९ सन्तानका बेसाहारा आमाबुवाको रोदन ! - Saptakoshionline
खोलाको किनारमा ९ सन्तानका बेसाहारा आमाबुवाको रोदन !
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५ समय: ९:५५:४६
बेलबारी । मोरङको बेलबारी १० र ११ वडाको बिचमा रहेको खोलाको किनारामा बृद्ध एक दम्पत्ति यतिबेला बेसाहारा जिवन बिताउन बाध्य भएका छन । उदयपुरको गाईघाटमा डेढ बिगाह जमिन र ९ सन्तानका मातापिता भक्तमाया र चेत प्रसाद पोख्रेल सन्तानले नहेरेपछि यतिबेला खोलाको किनारामा कष्टपुर्ण जिवन ब्यतित गरिरहेका छन । उनीहरु विगत दुई वर्ष देखी यहि खोलाको किनारामा बस्दै आएका छन । छोराहरुले हेरेन्न, भक्तमायाले भनिन मर्न काल पनि आँउदैन हातिले आएर पनि मार्दैन । एक डेढ विगाह जग्गा हामी सँग थियो छोराहरुलाई अंश दिएपछि घरवाट निकाली दिए भक्तमायाले भनिन कसले के ल्यादिन्छ र खाउला भनेर वाटो हेरेर वस्छौ ।
पोख्रेल दम्पतिका ७ भाई छोरा र दुई वहिनी छोरी पनि छन । केही भाई छोरा बेलबारीमै वसोवास गर्दै आएको र केहि भाई उदयपुरमै बस्दै आएका भक्तमायाले बताईन । छोरा वुहारीले घरवाट निकालेपछि बेलबारीमै रहेको बुढाथोकी बंशले कुलपुजा गर्ने धार्मिक वनमा आयौँ, उनले भनिन केहि समय त्यहाँ वसेपछि विभिन्न वहाना लगाएर हामीलाई निकाले अहिले चौलागाँईको कुलपुजा गर्ने छेउमा आएर वसेका छाैं त्यहाँवाट पनि हामीलाई निकाली दिन्छौँ भनेर धम्काउछन अव कहाँ गएर वस्ने हो उनले आँखा भरी आसु पार्दै भनिन ।
सोही ठाँउमा केही समय अघि राति आएको हात्तिले एक जना मानिस मारेको थियो । उनले भनिन हामीलाई पनि कहिले सम्ममा मार्छ होला । सो स्थानमा उनीहरु अहिले चिमको छाप्रो हालेर वस्ने गरेका छन । उनीहरुकी कान्छी छोरी कहिले काँही आएर चट्पटे वेच्ने र त्यसबाट चामल किनेर खाने गरेको उनले बताईन । उनकी कान्छी छोरी मिना खतिवडा पनि श्रीमानले आफुलाई छाडेर अर्की लिएर हिडेकाले छोरा समेत विहान वेलुका वनिबुतो गरेर पाल्नु परेको गनासो गरिन । वावु आमालाई सहयोग गर्दा दाजु भाईको समेत आफु सँग वोलचाल नभएको उनले बताईन ।
गतबर्ष समेत उनको बिषयमा समाचार प्रकाशित गर्दा उनका उदयपुरमा रहेका छोराले धम्की दिएका थिए । यसैबिच बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाका कुमारी पराजुलीले पिडित वृद्ध दम्पत्तिका छोरा वुहारीलाई वोलाएर सम्झाउने र नभए नगरपालिकाले उनीहरुको संरषण गरी सुरक्षित स्थानमा वसोवासको ब्यबस्था मिलाउने बताएकी छिन ।
अम्बेले गर्याे ५८ कराेडकाे काराेबार : आठाै वर्षमा आइपुग्दा ६० लाख बढि नाफा
इटहरी । सुनसरीकाे इटहरीस्थित अम्बे बचत तथा त्रृण सहकारी संस्थाले शनिबार साताै वार्षिक साधरणसभा सम्पन्न गरेकाे छ । सहकारी...
माल्दिभ्सविरुद्ध नेपाल विजयी
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलतर्फ नेपालले माल्दिभ्सलाई पराजित गरेको छ । दशरथ रङ्गशालामा शनिबार ...
नेपालले माल्दिभ्सविरुद्ध बराबरी गोल फर्कायो
। १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को पुरुष फुटबलमा अहिले नेपाल र माल्दिभ्स भिडिरहेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाल...
१ नम्बर प्रदेशको दर्जन बढी हिमाल देखिने यो डाँडा
इटहरी / प्रदेश नम्बर १ पर्यटकीय हिसाबले उच्च सम्भावना भएको क्षेत्र हो । संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्...
बनभोज हिँडेको बस झापामा दुर्घटना, १३ जना घाइते
झापा / पूर्वापश्चिम राजमार्ग अन्तरगत बिर्तामोड सडक खण्डको रेखा पुल नजिकै आज विहान भएको बस दुर्घटनामा परी १३ जना घाइते भए...
पाथिभरा आईडलको उपाधी सरस्वती गुरुङ र मनिता लिम्बुलाई
इटहरी / सुनसरीको इटहरीस्थित पाथीभरा सेकेण्डरी बाेडीङ स्कुलले गरेको प्रथम पाथिभरा आईडलको उपाधी सरस्वती गुरुङ र मनिता लिम्...